हे दैव ! हाम्रो आमा ब,चा,इदिनु ,हस्पिटलमा यति धेरै पैसा ति,र्न बाकि (हेर्नुस् भिडियो ):: Mero Desh
Published on: ११ आश्विन २०७८, सोमबार ०६:०७
२५ बर्षको कलिलो उमेरमा दुई बतच्चाको आमा यसरी हस्पिटलको बेडमा लम्पसार परेर थन्कि नुपरेको छ । नत हात च,ल्छ नत खु,ट्टानै अझ भनौ श,रिरको कुनै पनि अ,ङ्ग नै च,ल्दैन् ।
भरखरै २५ बर्ष लागेकि अन्जना थापा मगरको जिन्दगी अहिले अल नेपाल हस्पिटल सामाखुसि मा अ,लपत्र अवस्थामा छ ।तिनमहिना अगाडि प्रेसरले हानेपछि ढलेकि अनितालाई काठ माडौं उपचारको लागि ल्याइयो र अहिलेसम्म पनि उनी अस्पता लमा नै यस्तो जि,ण अवस्थामा ब,सिरहेकि छिन् ।
आफ्ना ६ बर्षिय र ४ बर्षिय सन्तानलाइ हेर्न समृत पाएकि छैनन् ।श्रिमानले उनलाई स्याहार सुसार गरिरहेका छन् ।उपचारकै क्रममा लगभक १२ लाख सकिसकेको श्रिमान बताउँछन् र ह,स्पिटलमा आठ लाख भन्दा बढि रकम तिर्न बाकि नै छ ।
कठै आउ,नुस् सह,योग गरौ। भिडियो हेरि सक्दो सेयर गरिद्नुहोला।
थप समाचार,,रमेश र नन्दा मातापिता बन्दै, डाक्टरले मिति दिइसक्यो (भिडियो हेर्नुस्)
निकै शक्तिशाली वक्ता र सहयोगी भावना भएका रमेश प्रसा ईंले नन्दासंगा विवाह गरेको लगभग १० महिना भएको छ ।उनीहरुले निकै धुमधामसंग विवाह गरेर आफ्नो मायालाई दिगो रुप दिएका थिए ।
उनीहरुको जोडी देख्दा सम्पूर्ण नेपालीहरु निकै खुशी देखिएका छन् । रमेशको सहारा बन्दै आएकी नन्दा निकै बुझकी छिन् ।उनको अनु सार विवाह गरेपछि अहिलेसम्म कुनै किसिमको झ गडा उनीहरू बीच भएको छैन ।
रमेश र नन्दालाई संगै देख्दा अझैपनी मान्छेले भर्खरै माया गास्दै गरेको जोडी जस्तो देख्ने गरे का छन् । रमेश र नन्दा अहिले मातापिता बन्न लागेका छन् ।उनीहरूको मायामा अब नयाँ सदस्यको आगमन हुँदै छ ।
उनीहरू अहिले एकाअर्कालाई यसैको माया र सद्भाव बाड्नमा बेस्त छन् ।नन्दा आफुले रमेश जस्तो श्रीमान पाउँदा निकै हर्षीत भएको बताउछिन् ।
भिडियो सामाग्री हेर्नुस!
यो पनि,,दोहोरी च्याम्पियनबाट डिला र राजुको टिम रु,दै बाहिरीयो, राजेन्द्र पाठक र मिनाको टिम बिजयी
दोहोरी च्याम्पियनबाट आज राजु केसी र डिला बिकको टिम बाहिरि,एको छ। आम नेपालीको मन जि,तेको यो टिम भोटकै कारण बाहिरिएको हो।
लाखौ दर्शकले राजु र डिलाको टिमको अ,पेक्षा गरेका थिए भने अ,धिकांश सहभागी कलाकार ले त् दो,होरी च्याम्पियनका बि,जेतानै राजु र डिला हुने ठो,कुवा समेत गरेका थिए। सबैलाई रु,वा,एर यो टिम बाहिरिएको हो।
आम दर्शकलाई समेत रु,वाएकी छिन डिला बिकले। राजेन्द्र पा,ठक/मिना नेपालको टिम बि,जयी भएर अर्को राउण्डमा प्र,वेश भएका छन भने आम दर्शकले दु*ख व्य,क्त समेत गरेका छन।
दुवै टिम द,रिलो मानिएको थियो। यस अगाडी अ,धिकंश प्रतिष्पर्धा जि,तेका राजु केसी र डिला बिकको लागि धेरै प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएका गायक राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालको टिम पर्दैगर्दा धेरैले यो पटक भने दर्शकले सोचे भन्दा फरक नतिजा, आएको हो।
दोहोरी च्याम्पियनको पछिल्लो केहि भ। गहरु रोचकहुदै गएपनि दर्शकले जुन टिमले जि,त्छ भनेर अ,नुमान गरेका छन त्यो भने हुन सकेको छैन।
भोटकै आधारमा जि,त हा,रको निर्णयहुने भएकै कारण अब कसले जि,त्छ भन्ने बिषय भने भोटमै नि,हित हुने आ,योजक टिमले बताएको छ। जजले दिएको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत भोटको आधारमा हुने जानकारी छ।
यस अगाडी मिना नेपालको टिमले कल्पना दाहालको टिमलाइ ह,राएर अ,गाडी ब,ढ्न स,फल भएको थियो भने डिला बिकको टिमले जेरीको टिमलाइ आ,उट गरेर अगाडी आउन स,फल भएको थियो।
टप ८ बाट टप ४ मा आउनको आगी यो ल,डाई भएको थियो । धेरैले राजु केसीको टिम ले जि,त्छ भनेका थिए भने उस्तै कमेन्ट मिना को टिमलाइ पनि आएको थियो।
आजकै कार्यक्रममा फेरी टप ८ बाट ४ को लागि बाल चन्द्र बरालको टिम र सपना रोकाको टिम ल,डिरहेको छ। उक्त टिमको मतपनि आगामी शनिबार बा,हिरिने छ। उक्त कार्यक्रमको पुरा भिडियो तल हेर्नुहोस।